Afaka mandeha mitady fikarohana lalindalina kokoa amin'ny mpifaninana amiko ve aho?
Eny, ny fitsikilovana ny mpifaninana amin'ny fikarohana fikarohana dia hevitra tsara. Raha ny tena marina, iray amin'ireo sariohatra nasongadiko sy ampiasaina amin'ny fomba fikarohana ao amin'ny sehatry ny Search Engine Optimization. Midika izany fa azonao ampiasaina tsotra izao ny lalàn'ny mpifanolo-bodirindrina aminao amin'ny tombony azonao manokana. Amin'ny fampiasana fitaovana henjana maimaimpoana maimaim-poana ianao dia afaka maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fikarohana lalindalina avo lenta sy hijery ny fisorohana ny fifaninanana, na dia mety henjana aza izany.
Iza no mahafantatra fa mety hahomby kokoa ny fikarohana fikarohana bakalorea. Matetika dia mampiasa io paikady io aho amin'ny tetikasa vaovao rehetra amin'ny aterineto, voalohany indrindra. Eny ary, andao hijery izany - ny fikarohana fikarohana bakotra dia tsy mila mianatra miparitaka na fitaovana rindrambaiko loatra. Raha ny marina, mety ho lavorary na dia ho an'ireo zazalahy ireo ihany aza mbola vaovao amin'ny dingan'ny fananganana rohy, ary koa ny hevitra momba ny SEO. Vokatr'izany, ianao dia handray soa avy amin'ny lalam-piofanana tsara indrindra amin'ireo mpiloka mpanohitra ambony anao 10 izay mitarika ny lalana mankany amin'ny tranonkalanao manokana.
Alohan'ny zavatra hafa, ahoana no ahitanao ny lisitry ny mpanohana anao? Manoro hevitra aho manaraka ity fikarakarana tsotra ity ho an'ny fikarohana bakalorea:
Mamorona ny lisitry ny URL an'ny mpifaninana ambony indrindra anao.
Fantaro ny rindran-kaonty rehetra mifandraika amin'ny fampiasana maimaim-poana na maimaim-poana amin'ny Internet.
Apetraho miaraka ny lisitra rehetra ao amin'ny lisitry ny mpifaninana aminao.
Manaova fikarohana lalindalina kokoa.
Mijoroa amin'ny rindrin'ny mpifaninana aminao amin'ny pejy web anao.
Mamolavola tahirin-drakitra iray amin'ny sora-bavahadin'ny rakitra ho an'ny fanavaozana amin'ny ho avy.
Alohan'ny zavatra hafa, dia mila mamantatra ny top 10 fikarohana fikaroka momba ny fikarakarana ianao mba hahazoana sombin-dahatsoratra voafantina manokana. Raha vao vita ny fikarohana fohy amin'ny Google, dia apetraho ao amin'ny lisitra maintinao ny URL tsirairay mba handrosoana amin'ny fiverimberenan'ny fikarohana.
Ary eto dia ho hitanao ny rindran-kaonty ho an'ny mpifaninana aminao mba hahazoana ny fikarohana fikarohana amin'ny fitaovana fidirana amin'ny aterineto. Soso-kevitra: aza misalasala misedra fitsapana miverimberina mampiasa fitaovana maro samihafa araka izay azonao atao. Midika eto aho fa ny rafitra rehetra mifandraika amin'izany dia iharan'ny olana iray ihany - tsy misy amin'izy ireny afaka manome antsika fijery feno tanteraka amin'ny profil-n'ny URL. Nahoana? Satria fotsiny izy ireo dia manolotra vokatra samihafa isan-karazany, ny tsirairay avy izay tarihin'ny banky tsirairay ary ny toy izany.
Ary eto isika dia miditra fifindrana tanteraka - inona no fitaovana tsara indrindra amin'ny fitaovam-pandrefesana (samy aloa, ary ireo manana fahafahana miditra malalaka) mba hampiasaina amin'ny fikarohana fikarohana bakalorea? Araka ny efa nolazaiko, dia manapa-kevitra fotsiny ianareo. Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ireo fitaovana tena nasongadiko, sy ireo safidy hafa izay nanandramako tamin'ny fanandramako manokana. Raha ny amiko, dia matetika aho mampiasa ny rafitra an-tserasera telo manaraka: Majestic SEO, Ahrefs, ary SEO Spyglass. Ankoatra ireo vahaolana hafa azo ampiasaina, dia azo ampiharina ihany koa ny Open Site Explorer, Backlink Watch, Diagnose Link, Small SEO Tools, ary ny Semalt Analyzer.
Raha vantany vao nanangona ny rohy rehetra avy amin'ireo mpifaninana ambony indrindra amin'ny fikarohana Google araka izay azo atao ianao dia afaka manohy amin'ny famoronana ny lisitry ny fikarohana fikarohana. Midika eto ianao fa tokony handroaka fotsiny ny zava-drehetra ao amin'ny lisitr'ireo mpifaninana mpifaninana. Mandehana, ampiasao ny takelaka mba hamoronana lisitra tokana (. tahiry txt), kopia ny rohy rehetra azonao hitadiavana, ary tehirizo fotsiny. Aorian'izay dia tsy maintsy manaisotra ny dika mitovy. Raha ny amiko, dia nampiasa an'i Dupe aho Handefa fitaovana maimaim-poana an-tserasera mba hanesorana ireo duplicates ary hanazava ny zava-drehetra.
Ary eto izahay dia tonga eo amin'ny teboka farany - ny fikarohana sy ny fanadihadiana mivantana ny mpifaninana. Amin'io fotoana io dia ny lisitry ny backlinks amin'ny ankapobeny no mety ho lasa be volkano. Izany no antony tokony hanananao fanamarinana roa mba hahazoana antoka fa ianao ihany no haka ireo santionany tsara indrindra mba hahatratrarana ny fahombiazany. Amin'izany fomba izany, mihainoa tsara ary tsindrio izay rindranasan-dahatsoratra nataon'ireo Google, ary iza no manana ny sandan'ny PR miaraka aminy. Mazava ho azy fa ireo laharam-pahamehana ireo dia laharam-pahamehana laharana voalohany ho an'ny fikarohana bakalorea. Etsy andaniny, mariho fa ny zava-drehetra voasokajy ao amin'ny Google dia tokony ho ampy tsara mba hampifandraisina amin'ny pejy Internet anao.
Amin'izany fomba izany, dia efa nahavita fomba efatra efa nampiasaina aho mba hamitana ny fikarohana sy ny fanadihadiana momba ny lalao mpanohana anao. Ireto misy izy ireo, fohifohy:
Rank Checker dia fitaovana maimaim-poana SEO software noforonina ho an'ny dingana goavana amin'ny famakafakana bakalorea. Aleonao manandrana azy aloha sy ny zava-dehibe, alohan'ny hijerena ny sisa amin'ny safidy.
Raha misy Scrapebox azo ampiasaina, azonao ampiasaina amin'ny fitantanana ny votoaty samihafa samihafa, toy ny hoe ny rohy dia tena velona, ​​ny endri-tsoratra manana azy amin'izao fotoana izao, ny habetsaky ny PR sy ny sandan'ny indexing amin'ny Google izay azony.
Azonao atao koa ny mampiasa Excel sy ireo fitaovana SEO maimaim-poana mba hamoronana takelaka tsara tarehy. Eny, mety toa kely dia kely ny asa, saingy mbola mendrika ny ezaka tokana.
Ho an'ny fikarohana lalindalina feno sy famakafakana, tsara kokoa ny manandrana ny SEO Spyglass. Tsy fitaovana fanasan-damba tokana fotsiny izany, fa sehatra iray amin'ny aterineto feno tanteraka mba handinihana ny famakafakana lalindalina ny adiresy URL tsirairay ary hanombanana ny toetra amam-panahin'izy ireo. Ampidino tsotra izao ny lisitry ny URL anao ary ankafizo ny backlinks rehetra aseho ho an'ny tsirairay.
Ankehitriny izao dia fotoana ahafahana mamerina ny rindran-damin'ny mpifaninana aminao amin'ny pejy web anao. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny miara-miasa amin'ny rohy tokana amin'ny fotoana iray. Alefaso any amin'ny dingan'ny tranokalan'ny mpifanolo-bodirindrina aminao ary sokafy ny lalam-pifandraisana tsirairay ao amin'ny tranonkala Internet. Amin'izany fomba izany, dia ho azonao hoe ahoana no nahazoan'ny mpanohitra ny tsenam-barotra faran'izay tsara indrindra. Raha ny fanehoan-kevitry ny blaogy dia tsy maintsy mametraka fanehoan-kevitra vaovao momba ny anao ihany ianao. Raha toa ka lahatsoratra momba ny forum izany, tsy maintsy handalo ny fisoratana anarana ianao ary hiditra fotsiny amin'ny adihevitra amin'izao fotoana izao. Indraindray dia mety ho hafatra bilaogy vahiny izany, noho izany dia tsy maintsy mandefa ny mailaka ianao ary mampiasà fotoana vitsivitsy amin'ny fanolorana lahatsoratra vaovao avy aminao. Mankanesa amin'ireto "lisitry ny kopia", ary hahazo fahatakarana ankapobeny momba ilay dingana.
Mamolavola tahiry tokana amin'ny angona rakitra rehetra ho an'ny fanavaozana amin'ny ho avy. Izany no ho tombontsoa sarobidy anananao. Noho izany, raha vantany vao vita ny lisitry ny backlinks naverina averina, dia aza adino ny manamarika ny famokarana rehetra, ny fanekena, ary ny tsy fahombiazanao rehetra (i. f. , nitodika tamin'ny rohy). Ny fanaraha-maso ny vondron'olona goavana amin'ny mpifaninana aminao dia tokony hanamarina ny iray amin'izy ireo izay ampiasainao izao hamokarana andalana mivantana. Manaova tahirin-tsoratra manokana na antontan-kevitra bakalorea ary mankafy ny fandrosoana tsara indrindra (na ho an'ny tetikasa hafa, hatrany hatrany) Source . Hahafinaritra izany!